Sunday, 24 December 2017 07:44
Finfinnee, Mudde 15, 2010 Biyyattiitti naannolee gara-garaa keessatti wiirtuuwwan wal’aansa kaansarii qofa kennan shan banuuf akka jedhu Ministeerri Eegumsa Fayyaa beeksise.
‘Daayiroktareetii’ Ittisaa fi Too’annaa Dhibee Ministeerichaatti Dursaan Garee Dhibeewwan Daddarboo Hin-ta’inii Doktar Bisiraat Dassaalany akka ibsanitti wiirtuuwwan kunniin ijaaramaa kan jiran Hawaasaa, Maqalee, Jimmaa, Goondarii fi Haramayaattidha.
Ijaarsa waliigalaa wiirtuuwwan kanneenii fi baasii meeshaa wal’aansaaf bajati Doolaara Ameerikaa miliyoonni 80 qabamee hojiinsaa hojjatamaa akka jiru ibsaniiru.
Kana dura rakkoo biyyoota badhaadhanii fi dinagdeen guddatanii akka turetti kan beekamu dhibeen kaansarii har’a rakkoo yaachisaa biyyoota guddataa jiranii ta’aa dhufeera jedhameera.
Dhibeen kun dhibeewwan lubbuu namaa galaafachuun beekaman keessaa adda-dureedha.
Keessumaa biyyoota guddataa jiran keessatti wal’aansi isaa haala gahaa taheen waan hin-argamneef darbees wal’aansi isaa maallaqa hedduu kan gaafatu waan ta’eef haala olaanaan babal’ataa dhufuusaa ragaaleen nimirkaneessu.
Itiyoophiyaattis dhibeen kun kutaalee hawaasaa gara-garaa miidhaa kan jiru yoo ta’u, wal’aansi isaa garuu Hospitaala Ispeeshiyaalayizdii Xiqur Anbassaatti qofa kennamaa jira.
Kun gahaa fi hunda kan wal-gahu waan hin-taaneef kutaalee hawaasaa dhibee kanaan hubamanii wal’aansa kana waliin ga’uuf hojjataa akka jiru Ministeerri Eegumsa Fayyaa beeksiseera.
Doktar Bisiraat akka ibsanitti wal’aansa kaansarii kutaalee hawaasaa iddoowwan biyyattii gara-garaa keessaaf waliin ga’uuf hojjatamaa jira.
Kanaanis waggaa dhufuu jalqabee ijaarsi isaanii xumuramee meeshaalee wal’aansaa barbaachisoo ta’an guuruun hojiitti akka seenan Doktarichi ibsaniiru.
Fuul-durattis guddina rakkinichaa hubachuun kutaalee biyyattii kaanitti wiirtuuwwan wal’aansaa wal-fakkaatoo babal’isuu fi haala itti-hawaasni fayyadamaa ta’u mijeessuun xiyyeeffannoon itti-kennama jedhaniiru.
Tajaajila kana iddoowwan gara-garaatti kennuu danda’uun keessumaa qaamolee hawaasaa wal’aansa kana argachuuf gara alaa deeman fayyadamoo taasisuun baasii fi bu’aa ba’ii hin-barbaachifne irraa oolchuuf gahee ifaa qabaata jedhameera.
Dhaabbati Fayyaa Addunyaa ragaan A.L.A 2015tti baase akka mul’isutti kaansariin addunyaa irratti dhibee nama ajjeesu adda-dureedha.
Waggaa eerame kanattis namoota miliyoona 8.8 badiisaaf kan saaxile yoo ta’u, kunis waggaa kana du’a ja’a keessaa tokko kaansariin akka ta’e mul’isa.
Waggaa waggaan ammoo namoonni miliyoona 10tti lakkaa’aman kaansariin qabamu; wal’aansa kana haala gahaan argachuun yoo danda’ame garuu namoota dhibee kanaan qabaman keessaa dhibbantaa 30 hanga 50 kan ta’an wal’aansaan fayyuu akka danda’an eerameera.
Rakkoon kun haala kanaan kan itti-fufu yoo ta’e A.L.A 20120tti baay’inni uummataa kaansariin du’uu miliyoona 10 kan ga’u yoo ta’u, waggaa waggaan baay’inni namaa kaansariin qabamuu ammoo miliyoona 16 gahuu akka danda’u ragaan kun nimul’isa.
Madda: Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa (FBC)
Saturday, 23 December 2017 07:37
Finfinnee, Muddee 14,2010- Qorannaan magaalaa Adaamaa sodaa balaa lolaa jalaa baasu qophaa’e.
Kantiibaan magaalichaa adde Adaanach Abeebeen FBCtti akka himanitti, bara darbe magaalattii balaa lolaa irraa baraaruuf Birrii miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 50n hojiin hojjetameera.
Ittisa balaa lolaatif bara darbe biyyoorraa kan hojjetame waaraan sodicha hambisuu waan hin dandeenyef furmaataf hojjetamaa jiraachuu eeran.
Yuunvarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa waliin ta’uunis qorannaan sirna maqsa dhangala’aa magaalattii qophaa’uu himan.
Bishaan lolaadhan bakka tokkotti kuufamus faayidaa hawaasaaf kan oolu ta’a.
Qorannaa gaggeeffame kanas hojiirra oolchuuf deebii Koomiishinii Hoggansa Sodaa Balaa Federaalaa eegaa jirra jedhan aadde Adaanach.(FBC)
Sunday, 24 December 2017 07:31
Finfinnee, Mudde 15, 2010 Ijaarsi paarkii industirii Oomisha Dawaa Qilinxoo dhibbantaan 75 xumuramuusaa Korporeeshiniin Misooma Paarkota Industirii ibse.
Itiyoophiyaan kaampaanota idil-addunyaa fi biyya keessaa bal’inaan hirmaachisuuf iddoowwan gara-garaa biyyattiitti paarkota idustirii ijaaraa akka jirtu beekamaadha.
Paarkota kanneen keessaa lafa heektaara 270 irratti kan qubate Paarkiin Industirii Oomisha Dawaa Qilinxoo Guraandhala 2009 jalqabee Garee Injinariingii Ti Se Ju Sivil Chaayinaan ijaaramaa jiru tokkodha.
Paarkiin baasii Birrii biliyoona 5.5 ol gaafatu kun maallaqa liqaan Baankii Addunyaa irraa argameen ijaaramaa kan jiru yoo ta’u, baatiiwwan sadii dhufanitti ijaarsi isaa akka xumuramu Korporeeshiniin Misooma paarkota Industirii beeksiseera.
Korporeeshinichatti ‘Injinarri’ piroojaktii Paarkii Industirii Qilinxoo Yageetaahun Aganyaw akka jedhanitti hojiileen ijoo ijoo ta’an wayita ammaa xumuramaniiru.
Ijaarsa isaa waggaa tokko keessatti xumuruuf kan karoorfame yoo ta’u, adeemsa hanga ammaati jiruun dhibbantaan 75 xumurameera jedhaniiru.
Qotiisi boolla bishaanii ja’aa fi kuusaan bishaanii guguddoo lama ijaarsi isaanii gutumaan guutuutti wayita xumuramu, ijaarsi daandii paarkicha keessaa fi hojiin riqichoota bishaan irra qaxaamuree darbuu sadii xumuramuusaa ibsaniiru.
Ijaarsa sheedota oomisha dawaaf iddoosaa mijataa gochuuf hojiin biyyoo kutuu fi guutuu harki caalaan xumuramuu isaanii kan himan Injinar Yageetaahun, hojiin ujummoowwan bitaa fi mirga daandii ijaaramaa jiruutti galaniis dhibbantaan 95 raawwatamuusaa kaasaniiru.
Ijaarsi gamoo bulchiinsa paarkichaa xumuramaa akka jiru kan eeran Injinar Yageetaahun dallaan paarkichaa, sararri balfi dhangala’aa itti dhabamsiifamu, hojiin sararoota elektirikaa fi telekoomii diriirsuu haala gaariin hojjatamaa akka jiran ibsaniiru.
Sababa diizaayinii fi lafaa waliin wal-qabataniin hojiinsaa saffisa eegameen akka hin-deemne himaniiru.
Akka ibsa ‘injinara’ piroojaktichaa kanatti sababa rakkoolee uumamaniin yeroo qisaasa’e kiisuuf ‘kontiraaktarri’ ijaarsa isaa geggeessu dabaree lamaan guyyaa fi halkan hojjataa jira.
Ijaarsi paarkichaa wayita xumuramu daandii aspaaltii kiiloo meetira 18 dheeratu, tajaajiloota dhiheessii bishaanii, sheedota ‘loojistikii’, iddoowwan magariisaa, man-kuusaawwan, wiirtuuwwan bashanannaa, wiirtuuwwan ‘biiznasii’, iddoowwan dhaabbii konkolaataa fi tajaajiloota fakkaatan kan kennu ta’a.
Itiyoophiyaan dawaa lammilee isheef ishee barbaachisu dhibbantaa 80 ga’u biyyoota alaa irraa sharafa alaa olaanaan kan galchitu yoo ta’u, Paarkiin Industirii Oomisha Dawaa Qilinxoo fedhii kana oomisha biyya keessaan guutuun garasitti galii sharafa alaa akka argamsiisu eegama.
Abbaa-taayitichaa kurmaana tokkoffaa baranaa keessatti galii Birrii bil. 3.03 walitti qabuu isaa beeksise
Torbe Kana 29701
Ji'a Kana 49449
01/05/07 irraa eggalee 8010502
Kan Amma Daawwachaa Jiran 7